မူလတန်းအဆင့်ဓမ္မစကူးလ်ဆရာဖြစ်သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ~ Myaylatt Daily.
9:40 PM သတင်း No comments
မင်းဘူး မေ ၁
ဓမ္မစကူးလ် ဖောင်ဒေးရှင်း(ဗဟို)နှင့် မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပ အပ်သော ဓမ္မစကူးလ် ဖောင်ဒေးရှင်း(ဗဟို) အကြိမ် (၁၂၀၈)ကြိမ်၊ မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် ဓမ္မစကူးလ် ကော်မတီအဖွဲ့၏(၆)ကြိမ်မြောက် မူလတန်းအဆင့်ဆရာဖြစ်သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ (၃) နာရီက မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းသာကြီးကျောင်းတိုက်၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားကို နမောတဿ သုံးခေါက်ညီညာစွာရွတ်ဆို ဘုရားရှိခိုးဖွင့်လှစ်ပြီး မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့နယ်ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီအဖွဲ့ သြဝါဒါစရိယ၊ မဟာဝိသုတာ ရာမတိုက်သစ် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏိက မထေရ်မြတ်မှ အဖွင့်သြဝါဒကထာမိန့်ကြားချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး သံဃာတော်များက သင်တန်းသား၊သင်တန်းသူများအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ မင်းဘူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစန်းဌေးမှ အားပေးတိုက်တွန်းစကားပြောကြားပြီး ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း (ဗဟို)နည်းပြများအား အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သင်တန်းသားသူများ ကိုယ်စား ဆရာဦးနိုင်လင်းမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနောက် မကွေးတိုင်းဓမ္မစကူးလ် ကော်မတီအဖွဲ့နာယက၊ မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အေးစေတီ မြောက်ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏောဘာသ(စိုးဉာဏ-ငဖဲ)ဆရာတော်မှ နိဂုံးချုပ် သြဝါဒကထာ မိန့်ကြားချီးမြှင့်ပြီး အခမ်းအနားကို ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိဋ္ဌတု(၃)ခေါက်ညီညာစွာ ရွတ်ဆိုအဓိဋ္ဌာန် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားသို့ မကွေးတိုင်းလုံးဆိုင်ရာ ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီသြဝါဒါစရိယ ဆရာတော် အမှူးပြုသော ကော်မတီဝင်များ၊ မင်းဘူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစန်းဌေး၊ မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်ကံ၊ မင်းဘူးခရိုင် ပညာရေးလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး၊ မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီအဖွဲ့များ၊ တက်ရောက် ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မူလတန်းအဆင့် ဓမ္မစကူးလ်ဆရာဖြစ်သင်တန်းကို ဧပြီလ(၂၄)ရက်နေ့မှ (၃၀) ရက်နေ့ထိ ရက်သတ္တပတ်ကြာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသူ/ သား (၆၀)ဦး၊ လေ့လာ(၁၂) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြေလတ်ဂျာနယ် အတွဲ-၅၊ အမှတ်-၄၊ ၂၀၁၉ ၊ ဇွန်လ (၁-၁၅...
မင်းဘူး(စကု) မြို့နယ်အတွင်း လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင...
အသက်(၂၅) နှစ်အောက် အမျိုးသားပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပ...
မှုခင်းကျဆင်းရေး အသိပညာပေး ဟောပြော
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ဘီးဇပ်ခုံကျေးရွာတွင် ဧရာဝတီမြစ်ကမ...
ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့ပေါ်ရှိ တန်ခိုးကြီးဘုရားများတွင် က...
မြို့သစ်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေ...
မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်​အတွင်းရှိ စိန်​ခြည်​လင်း သ...
မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်​အတွင်းရှိ ​လေး​ဘေးသင့်​ ပြည...
ရွှေမိတ်သစ် ( ချောက်-မကွေး ) ခရီးသည်ယာဉ် နှစ် စီးတိ...
မင်းဘူးမြို့နယ် ​ကျေးရွာငါးရွာ၌ စွန့်​ပစ်​အမှိုက်...
မင်းဘူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ နေ့ဆွမ်း နှင့်​ ခဲဘွယ်...
မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်တွင် မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေ...
မင်းဘူး(စကု) မြို့နယ်အတွင်း လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြော...
မြေလတ်ဂျာနယ် အတွဲ-၅၊ အမှတ်-၃ ၊ ၂၀၁၉ ၊ မေလ(၁၆-၃၁)ရ...
သားအမိအရင်းကို လင်မယားဟု ပေးစားသည့်ပထွေးအား သံပို...
ကိုဝလုံး နဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ဒီနေ့ လွတ်မြောက်...
မင်းဘူးမြို့နယ်၊ ရေမျက်ကျေးရွာတွင် သီလရှင်တစ်ပါး အ...
(၇၃)နှစ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်ဖွဲ့နေ့ကို ကြိုဆ...
မန်းရေနံမြေနှင့် MPRL E&P Pte. Ltd. တို့မှ ဆောက်ရွ...
လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်​ ကျေးရွာနှစ်ရွာတွင် သန့်ရှင်...
လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်သေဆုံးသူ သုံးဦးအား ကျန်ရစ်သူ ...
ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၌ လင်မယားချင်း စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ...
ထီးလင်းတွင် ဆွမ်းအုပ်ဖြင့် ဆွမ်းပို့ကြသည့်ဓလေ့ ရှိ...